रोबोटिक्स ईन्जिनियरि on् मा Münir Türk संग साक्षात्कार 🦾 - Ne gerekir?
रोबोटिक्स ईन्जिनियरहरूको लागि रोडम्याप, नमूना परियोजना
घरेलु उत्पादन रोबोटिक आर्म प्रोजेक्ट मालिक रोबोटिक्स ईन्जिनियर मनीर टर्क
मोनिर टार्क एक इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियरि student विद्यार्थी हुन् जसले मैदानमा आफ्नो बाटो बनाएका छन्। उही समयमा, उनी गाजियान्टेप इनोभेसन क्लबको सदस्य छन्। उहाँ हाल घरेलु उत्पादन रोबोटिक आर्म प्रोजेक्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। Münir Bey उपयोगी सामग्री साझा गर्दछ जस्तै प्रस्तुतीकरणहरू र लिked्कइनमा ब्लग पोष्टहरू। हामी विश्वास गर्दछौं कि यसलाई अनुसरण गर्नुपर्छ।
श्रीमान मनिर, आउनुहोस् ती मानिसहरूलाई मद्दत गर्नुहोस् जो तपाईसँग रोबोटिक्स ईन्जिनियरि doing्गका बारे सोच्दै छन् वा जसले अझै पनि पत्ता लगाउन सक्दैनन् कि उनीहरु यो पेशेमा छन्।
तपाईलाई लाग्छ कि रोबोटिक्स ईन्जिनियर हुनु पर्छ?
सबैभन्दा पहिले, साथीहरू जसले रोबोटिक्स ईन्जिनियर बन्ने विचार गरिरहेका छन् उनीहरूले यस क्षेत्रमा रुचि राख्नुपर्दछ। यस क्षेत्रमा रुचि केवल प्रासंगिक श्रृंखला वा चलचित्रहरू हेर्नु हुँदैन। तिनीहरू वास्तवमै जिज्ञासामा रुचि राख्नुपर्दछ।
यस पेशेमा हामी गुगलमा दिनको हजारौं पटक खोजी गर्दछौं। अ ,्ग्रेजी, हिन्दी, टर्कीमा खोजी गर्नुहोस् ... किनकि हामीले अन्य व्यक्तिहरूको सोचाइ, उनीहरूले के गरेको, के-कुन बाटोमा तिनीहरू तपाईंसँगै आएका छन् भन्ने प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु पर्छ। यसको अन्तमा, हामी के राम्रो गर्न सक्छौं भन्ने प्रश्न सोध्नु आवश्यक छ।
ती जो निरन्तर इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू परीक्षण गर्छन्, आश्चर्यचकित हुन्छन् कि कसरी परिचित उपकरणहरू जस्तै किबोर्ड र चूहोंले कार्य गर्दछ ... रोबोटिक इन्जिनियरि। यी व्यक्तिहरूलाई धेरै राम्ररी सूट गर्छन्।
हामीले हेर्दा तपाई शिक्षालाई ठूलो महत्व दिनुहुन्छ। यद्यपि तपाइँ धेरै व्यवसाय लाइनहरु मा उन्नत छ, तपाईं अझै पनि प्रशिक्षण मा भाग लिनुहुन्छ कि तपाइँको क्षेत्र मा सुधार हुनेछ।
रोबोटिक्स ईन्जिनियरहरूलाई के प्रशिक्षण र कार्यक्रमहरू सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ?
धन्यबाद, हो शिक्षा मेरो जीवनमा पहिलो स्थानमा छ। म यो बुझेर हिँड्दछु कि कुनै सफलता आफुबाट सिक्न, जानेर र अन्वेषण बिना नै आउँदछ।
मलाई सफ्टवेयर र हार्डवेयरको सूची दिनुहोस् जुन तपाईको लागि रोबोटिक्स इन्जिनियरि .मा मुख्य रूपले ज्ञात हुनुपर्दछ।
सर्वप्रथम, उनीहरूले कम्तिमा पनि पीसीबी डिजाइन प्रोग्रामहरू थाहा पाउनुपर्दछ जस्तै Altium Designer, Eagle, kiCad, Proteus, OrCad को रूपमा। तिनीहरूले यी कार्यक्रमहरूको जटिलताहरू र अपरेटिंग तर्क सिक्नुपर्दछ। पीसीबीको डिजाईन गर्दा उनीहरूले होशियारीपूर्वक सोच्नु पर्छ। किनकि यी वास्तविक जीवनमा प्रयोग गरिने छ, ती चीजहरू दिमागमा राखेर गर्नुपर्छ।
तिनीहरूले हार्डवेयर विकास बोर्डहरू कसरी रास्पबेरी पाई, अर्डिनो, टेन्सी, पीआईसी इत्यादि प्रयोग गर्ने बारे जान्नुपर्दछ।
तिनीहरूले सफ्टवेयर भाषाहरू पायथन, सी, सी ++ मा विकसित गर्नुपर्नेछ
यहाँ मैले सफ्टवेयर र हार्डवेयरको बारेमा उनीहरूलाई थाहा पाउनु पर्छ, शिक्षा भन्दा। किनभने यी कसरी सिक्ने उत्तम, तिनीहरूले त्यस क्षेत्रमा प्रशिक्षण प्राप्त गर्नुपर्दछ। के तिनीहरू यसमा काम गरेर, अडेमी प्रशिक्षणमार्फत वा इन्जिनियरको साथ हेरेर अझ राम्ररी सिक्छन्? तिनीहरूले आफ्नो समझ अनुसार आफैलाई छान्नु पर्छ। यो पेशेको लागि एक समान शिक्षा ढाँचाका साथ प्रत्येक व्यक्तिको मूल्यांकन गर्न सही हुँदैन।
तपाईंले लिंक्डइनमा मतदान गर्नुभयो।
के यो सफल भयो किनकि उनीहरू चलाख थिए?
के तिनीहरू सफल भए किनभने उनीहरू मेहनती थिए?
तपाईं यस प्रश्नावलीको उत्तर दिनुहुन्छ? त्यो किन हो?
म पक्कै जवाफ दिनेछु किनकि ती मेहनती छन्। किनभने हाम्रो शिक्षक शिक्षक अहमत Şेरिफ İzögören को रूपमा, "नि: शुल्क चीज केवल माउसट्र्यापमा छ।" म सोच्दै अगाडि बढिरहेको छु। विश्वास गर्नुहोस्, म यस को सबै क्षेत्रहरु मा वास्तविकता देख्छु।
यदि म अहिले यो स्तरमा पेशेवर हुन थाल्छु भने, यो बिल्कुल निर्भर छ मलाई चाँडै उठ्ने र कम्तिमा १२ घण्टा इलेक्ट्रोनिक्समा खर्च गर्नमा। यो पक्कै पनि सजिलो छैन, तर म विश्वास गर्दिन कि प्रयास बिना सफलता आउनेछ।
यो पेशा केवल रोबोट उत्पादन गर्ने मात्र होईन जुन दैनिक कार्यहरू गर्दछ। धेरै रचनात्मक प्रक्रियाहरू विकसित गर्न सकिन्छ, रोबोट मानव अंग उत्पादन गर्नबाट। श्री मनीर हाल रोबोटिक हात निर्माणमा काम गर्दैछ।
के तपाईंले हाल काम गरिरहनुभएको रोबोटिक आर्म घरेलु उत्पादन हुनेछ?
हो, रोबोट हात घरेलु उत्पादन हुनेछ। यो प्रोजेक्ट ती व्यक्तिको लागि हो जससँग एउटा अंग छैन वा प्रयोग गर्न सक्दैन। हामी मांसपेशिमा सिग्नलहरू पढेर हाम्रो रोबोट बाहु सार्ने कोशिश गर्दैछौं।
मैले उनीहरूका छविहरू मेरो लिंक्डइन ठेगानामा पोष्ट गरे। यो एक परियोजना हो जुन मैले धेरै मूल्यवान् छु। हामी यसमा दुई साथीको रूपमा काम गरिरहेका छौं। हामी धेरै सस्तो लागतको साथ यो बाहु उत्पादन गर्ने कोशिश गरिरहेका छौं। किनकि हामी चाहन्छौं कि सबै व्यक्तिहरू धर्म, जाति, लि financial्ग, आर्थिक अवस्थाको पर्वा बिना खरीद गर्न सक्षम होऊन्। हामी उनीहरूको खुशी देख्न चाहन्छौं जब उनीहरू त्यो पाखुराको एक चिसो पानी लिन सक्छन्।
हाम्रो देशमा हामी प्राय: कच्चा पदार्थ, सवारी साधन र मेसिनरीको बारेमा गुनासो सुन्छौं। महँगो उत्पादनहरू, आयले हाम्रो जेबलाई बल दिन्छ। तर तपाईं सफलताको बाटोमा तपाईं चाहानुहुन्छ भनेर पुग्न गुनासो छोडिदिनुभयो।. टर्कीमा 1०० टीएलको लागि एक खरीद गर्नुको सट्टा तपाई 3.500..5०० टीएलको लागि produce उत्पादन गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ। यो पनि प्राप्त गर्न तपाईं पीसीबी प्रशिक्षणहरूमा भाग लिनुभयो।
अर्कोतर्फ ठूला कम्पनीहरूले बजेट अभाव बिना नै द्रुत आय आर्जन गर्ने उद्देश्यले आफ्नो यात्रा सुरु गर्छन्। यसले उपकरणहरू वा मेशिनहरू किनेको ख्याल नगरी लागत कटौती नगरी उत्पादन पूर्ण गर्दछ। यसले उपभोक्ताको जेबलाई जबरजस्ती गरिरहेको छ।
तपाईंले प्राप्त गर्न खोज्नु भएको लागत कटौती चरणहरूले वास्तवमा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्नेछ। गर्व ... म चाहान्छु कि द्रुत पैसा कमाउने कुरामा जोड दिइएन यदि यो उपभोक्ता हो भने, यदि त्यहाँ सफलता छ ... पैसा आउँछ, पछि सबै।
रोबोटिक्स ईन्जिनियरहरूको खरीद समस्याहरूको बारेमा तपाईं के भन्न चाहानुहुन्छ?
धेरै धेरै धन्यबाद, negerekir.com परिवार को रूप मा, पनि तपाईको समर्थन र प्रयास को लागी धन्यवाद। सबै भन्दा पहिले, दुर्भाग्यवस, हामी खरीद मा कठिनाईहरु छन्। यदि हामीले टर्कीमा एक मुट्ठीभर कम्पोनेन्ट्स (प्रत्येक साधारण चीजहरू जो संयुक्त चीज बनाउँछन्, तत्व, तत्व) उत्पादन गर्छन् भने, हाम्रो खरीद १०० TL भन्दा बढी हुँदैन। तर दुर्भाग्यवश हामी धेरै महँगो भइरहेका छौं किनकि त्यहाँ टर्कीमा उत्पादन गर्ने कोही पनि छैन।
बरु कार्ड आफै लिनुको सट्टा; हामी आफैंले गर्छौं, यसलाई आफैंमा भेला हुन्छौं र सफ्टवेयर आफैंमा स्थापना गर्छौं। सामग्री उत्पादन गर्ने देश हुन, हामी टर्की हुनुपर्छ कि सामग्रीहरू कसरी प्रयोग हुन्छन् जान्दछन्। हामी जति धेरै घरेलू उत्पादनको लागि प्रयत्न गर्दछौं, हामी निश्चित रूपमा ती कम्पनीहरूलाई समयको साथ बदल्नेछौं।
जब हामी जान्छौं कि सबैभन्दा सानो ढोका अलार्म प्रणाली विदेशबाट पनि धेरै महँगो छ, हामी यसलाई खरीद गर्दैनौं। हामी बस्दछौं र हाम्रो आफ्नै क्यामेरा ढोका अलार्म प्रणाली स्थापना गर्दछौं। 😊 हामीले गाह्रोलाई छनौट गर्‍यौं, तर मलाई आशा छ हामी यसका फाईदा चाँडो भन्दा चाँडो देख्ने छौं।
तपाईंले KOSGEB उद्यमिता प्रशिक्षणमा आवेदन गर्नुभयो र प्रक्रियाहरू पूर्ण गर्नुभयो र तपाईंको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभयो। तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ कि एक ईन्जिनियर पनि बिक्री र मार्केटिंग उद्योग मा एक राम्रो उद्यमी हुनु पर्छ। तपाईसँग धेरै मूल्यवान गाईड छ। के तपाईं हाम्रा पाठकहरूको लागि त्यो गाईड प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ?
हस्तक्षेप नक्शाको लागि विचारसहित रोबोटिक्स ईन्जिनियरहरूलाई तपाई के सुझाव दिनुहुन्छ?
हो, यो मलाई लाग्छ। म बिक्री, बजार र व्यापार मा हरेक दिन नयाँ जानकारी खोज्दै छु। अब, मेरो विद्यार्थी जीवनमा पनि, म ईञ्जिनियरि asका साथै बिक्री र मार्केटिंगबाट आम्दानी कमाउँछु।
त्यसोभए किन यो एक इन्जिनियरको लागि महत्त्वपूर्ण छ?
ईन्जिनियर एक व्यक्ति हुनुपर्छ जसले दुबै उत्पादन र मार्केट गर्छ जुन उसले उत्पादन गर्छ। स्वचालन मेशिनहरूले पनि उत्पादन गरिरहेका छन्। हामी, ईन्जिनियरहरू कम्पनीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू हुन् जसले हाम्रो देश र ब्रान्डको घोषणा गर्नेछन्।
विक्रेताले आधारभूत ज्ञानको साथ "x" मेशीन परिचय गर्न सक्दछ। तर यो उत्पादन गर्ने इञ्जिनियरसँग मेसिनको सबै विवरणहरूको पूर्ण ज्ञान छ। यसैले मलाई लाग्छ कि ईन्जिनियरहरूले यस काममा राम्रो परिणाम प्राप्त गर्नेछन्।
तपाईंको प्रश्नमा आउँदैछ, यी व्यक्तिहरूले धेरै खोजी गर्नु पर्छ। तिनीहरूले कदम मिलाएर योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ र हरेक विचारलाई तल सार्नु पर्छ। तिनीहरूले पनि यी नोटहरूलाई प्राथमिकता र महत्त्वपूर्णको रूपमा दर्जा दिनुपर्दछ। यस तरीकाले, तिनीहरूसँग ठोस आधार नक्सा छ।
तपाईं रोबोटिक्स परियोजनाहरु को कोष / समर्थन गर्न चाहने पार्टीहरुलाई के भन्न चाहानुहुन्छ?
समर्थन पक्ष धेरै सावधान हुनु पर्छ। तिनीहरूले मानिसहरूलाई तिनीहरूको काम, धर्म, राजनीति वा विश्वासको आधारमा सम्पर्क गर्नुपर्दछ। परियोजनाहरूलाई समर्थन दिनुहोस् जुन वास्तवमै हुनुपर्दछ, आवश्यक छ। तिनीहरू सुलभ हुनुपर्छ। तिनीहरूले एक अध्ययन गर्नुपर्दछ जुन केवल मध्य शहरहरूमा बस्ने मानिसहरूलाई मात्र होइन तर हरेक शहरका मानिसहरूलाई पनि पुग्न सक्छ। मेरा नम्र विचारहरू यस प्रकारका छन्।